Paweł, स्मार्टमेमा लेखक
द्वारा पोष्टहरू पावलले
डोम » लेख Paweł द्वारा प्रकाशित
Paweaएक धेरै सकारात्मक व्यक्ति हो जसले एक भन्दा बढी गोप्य कुरा लुकाउँछ? उसलाई गुगल होम र यसमा जडान गर्न सकिने सबै कुरा मन पर्छ। ऊ आफ्नो विचार व्यक्त गर्न डराउँदैन, र उसको लक्ष्य भनेको स्मार्ट घर डिजाइन गर्नु हो जुन यो दृश्यात्मक छैन। म दुबै स्मार्ट होम उत्पादनहरू र क्यामेरा समीक्षा गर्न पाउँदा खुसी छु - जस्तै कार क्यामेरा।
समीक्षा, स्मार्ट होम, शाओमी होम
रोइदमी हव्वा प्लस - के यो वास्तवमै "+" मा छ?
समीक्षा, भ्याकुम क्लीनर, roidmi, स्मार्ट घर
इमानदारीपूर्वक, मलाई यो समीक्षा लेख्न गाह्रो भयो। मैले यो मध्यरातमा लेखेको हुनाले होइन, र म 24:०० बजे काममा उठ्नुपर्‍यो (यस समयमा कफीले आश्चर्य कामहरू गर्न सक्दछ!)। समस्या फरक छ ... Roidmi ...
समीक्षा, स्मार्ट अटो
कारमा "वसन्त" सूचकको अर्थ के हो? आईकार II ले तपाईंलाई सत्य कुरा भन्दछ!
कम्प्युटर, obd, कार, स्मार्ट अटो
म तिमीलाई गोप्यमा केहि भन्नेछु। मलाई गाडीको बारेमा धेरै थाहा छैन। म उनीहरूको बारेमा मात्र जान्दछु कि तिनीहरू गाडी चलाउँछन्, किन ड्राइभ गर्छन्, ढोका कसरी खोल्ने छन् (मेरो साथीहरू ड्राइभि school्ग स्कूलमा काम गरिरहेका छन् र मलाई विश्वास गर्छन् ...
वनप्लस 8T। के यो राम्रो फोन हो? यसलाई जाँच गरौं!
सेल, oneplus, समीक्षा, स्मार्टफोन
स्मार्टफोनहरू। मेरो विचारमा हामी प्रत्येकसँग कम्तिमा एउटा छ। त्यहाँ समयहरू छन्, तथापि, तपाईंले नयाँ छनौट गर्नुपर्नेछ। र त्यसपछि प्रश्नहरू उठ्छन्। तर कुन? कुन हाल सबैभन्दा राम्रो हो? के हामी5जी बाट क्यान्सर पाउनेछौं? (यो अन्तिम ...
गुगल गृह, समीक्षा, स्मार्ट होम
Eufy इनडोर क्याम - हरेक घर को लागी एक क्यामेरा!
क्यामेराकन्फिगरगर्नुहोस्, सुरक्षा क्यामेरा, अनुगमन
मलाई जहिले पनि कसैले मलाई हेरिरहेको छ जस्तो लाग्छ - यस गीतको गीतले मैले आज समीक्षा गरेको गृह निगरानी क्यामेरालाई उत्तम वर्णन गर्दछ। युफी इन्डोर क्याम यसको प्राविधिक क्षमताहरूको विचारमा धेरै सस्तो छ। पसलमा ...
नयाँ स्मार्टब्यान्ड = मी ब्यान्डको लागि प्रतिस्पर्धा?
बैंड, समाचार, oneplus, स्मार्टब्यान्ड
शियोमी हाल (मेरो विचारमा) "स्मार्टब्यान्ड" को मुख्य निर्माता हो। हामीले कम्तिमा मी ब्यान्ड have विमोचन गरेका छौं, हामी about वटा बारे सुन्न सक्दछौं। कल्ट फोनका निर्माता वनप्लसले यस क्षेत्रमा चिनियाँ निर्मातालाई धम्की दिने निर्णय गरेको छ। जनवरी ११ मा भएको थियो ...
वनप्लस Lite लाइट - एक गणित कम्पनीबाट एक औसत
समाचार, oneplus, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, साधारण
वनप्लस Lite लाइट (वा यसको अन्य नाम वनप्लस E इ) एक नयाँ गणितिय कम्पनीले घोषणा गरेको हो "मध्य विद्यालय"। यस निर्णयको साथ, निर्माता पहिलो दर्शनमा प्रयोग गरिएको दर्शनमा फर्कन्छ (वनप्लस १ र २ र वनप्लस ...
महामारीमा स्मार्ट घर। यसैले म उपकरणहरू किन्नको लागि, नयाँ जुत्ताहरू किन्न छैन
31 डिसेम्बर 2020
प्रश्नावली, Samsung, स्मार्ट, स्मार्ट घर
एक युग मा जब विभिन्न उद्योगहरु पूरा गरीरहेको छन् भेट, त्यहाँ कम्पनीहरु छन् कि वास्तव मा राम्रो गरिरहेछन्। यसमा स्मार्ट टेक्नोलोजीका निर्माताहरू सामेल छन्। सामसु्गले अध्ययन गराएको छ कि कसरी महामारी एक नयाँ को आकार को प्रभावित ...
Amazon एलेक्सा, समाचार
अलेक्सा! पोलिस बोल्न सुरु गर्नुहोस्। कृपया!
Alexa, आवाज सहायक, वक्ता
यदि कोहीले मलाई चिन्छ भने, उनीहरूलाई थाहा छ म भ्वाइस सहायक स्पिकरहरूको ठूलो प्रशंसक हुँ (मसँग गुगलबाट दुई जना छन्)। म धैर्यतासाथ पर्खिरहेछु उनीहरूको लागि मलाई पोलिशमा बोल्न। बाटोमा केही "फिटिंगहरू" थिए, तर ...